eParewa || Peace and Prosperity » अब स्वस्थ क्षेत्र सुधारको लागि मात्र नभई कुशासनको विरुद्ध आजदेखी ईलाममा सत्यग्रह सुरु गर्ने डा.गोबिन्द के.सि.को चेतावनी
अब स्वस्थ क्षेत्र सुधारको लागि मात्र नभई कुशासनको विरुद्ध आजदेखी ईलाममा सत्यग्रह सुरु गर्ने डा.गोबिन्द के.सि.को चेतावनी
२०७५ पुस २५ गते बुधबार १२:२१
ईलाम-स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सूधारको माग राख्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले माग राख्दै आएका डा.गोबिन्द के.सि.ले आजदेखी ईलाममा सत्यग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन । यसअघि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. केसी पुस १७ देखि अनशन...
ईलाम-स्वास्थ्य शिक्षा र सेवामा सूधारको माग राख्दै आन्दोलनरत डा. गोविन्द केसीले माग राख्दै आएका डा.गोबिन्द के.सि.ले आजदेखी ईलाममा सत्यग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन । यसअघि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै डा. केसी पुस १७ देखि अनशन बस्न इलाम आएका थिए ।
राज्यले पन्ध्रौं सत्याग्रहको सहमतिलाई वास्ता नगरेको भन्दै ईलाम बजारमा मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै डा. केसीले १६ औं सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । अबको सत्याग्रह स्वास्थ्य क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित नरही कुशासनका विभिन्न पक्षविरुद्ध हुने समेत केसीले बताए ।
स्वस्थ क्षेत्रको लागि धेरै अनशन बसे तर उपलब्धी हुन सकेन । अब कुशासन बिरुद्ध बस्छु । उनले भने । पुस १७ देखि अनशन बस्न आएका उनले संसदीय समितिले माग पुरा गर्न २ दिनको समय मागेपछी ७ दिनको समय दिएका थिए । ७ दिनमा पनि राज्यले माग पूरा गर्न नसकेपछि आज देखि अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन ।
प्रकाशित मिति २०७५ पुस २५ गते बुधबार १२:२१